Iindaba -UUGreenPower ikhupha iZisombululo eziShumi zokuThengisa
I-UUGreenPower ikhupha iZisombululo ezi-4 zeSupercharging!
Incam engundoqo: ngo-Agasti 26, i-14 Shanghai International umboniso izibonelelo umboniso kushishino yabanjwa e Shanghai New International Expo Centre. Kulo mboniso, inani lamashishini eenkwenkwezi zasekhaya nakwamanye amazwe kubandakanya izisombululo zokutshaja ezikrelekrele, ukuxhasa izisombululo, ubuchwephesha bokutshaja, inkqubo yokupaka ekrelekrele, unikezelo lwamandla ezithuthi, i-photovoltaic, inkqubo yokugcina amandla, njl.
Ukusombulula ingxaki yamandla kunye nezokusingqongileyo, utshintsho olukhulu lwenzekile kushishino lweemoto kwihlabathi. Izithuthi zamandla amatsha ziye zaba sisicwangciso-qhinga sophuhliso lwamazwe ahlukeneyo, kwaye ubeko lophando lwetekhnoloji kunye nophuhliso kunye nenkqubo yokwenziwa kwamashishini zihlala zikhuthazwa. NgeyoMnga ngo-2018, ikhomishini yophuhliso nohlengahlengiso lwesizwe, ulawulo lwamandla esizwe, iCandelo loMphathiswa Wezemveliso kunye neThekhinoloji yoLwazi kunye noMphathiswa wezeziMali ngokudibeneyo bakhuphe "isaziso esikwisicwangciso somsebenzi sokuphucula amandla enkxaso yokutshaja kwezithuthi zamandla amatsha", kufuneke ngokucacileyo "ukukhawulezisa uphando kunye nokusetyenziswa kwetekhnoloji yokutshaja amandla amakhulu", "ukuqulunqa imigangatho yobuchwephesha yokutshaja ngamandla kweebhasi zombane, kunye nokwenza uphando kunye nophuhliso lwetekhnoloji yokutshaja amandla amakhulu kwiimoto zabakhweli kunye nophando oluphambi kokulumkisa sebenza ". NgoJulayi 2020, iGridi kaRhulumente yeTshayina, kunye neChina Power Grid Corporation, iChademo protocol Association yaseJapan kunye neTokyo Electric Power Co, Ltd., ngokudibeneyo bakhupha iphepha elimhlophe kuhambo lweChajiji lokutshaja iteknoloji yezithuthi zombane, ezikwaphawula isizukulwane esitsha setekhnoloji yokutshaja esiya kwinqanaba elitsha lokuqulunqwa okuqhelekileyo kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso, kunye nokutshaja kwamandla amakhulu kwamkelwa ngabasebenzi abaninzi nangakumbi.
Okumangalisayo kukuba, kulo mboniso, i-Shenzhen UUGreenPower Electric Co, Ltd. (ekuthiwa yi-UUGreenPower), inkokeli ye-EV yokutshaja okrelekrele kunye nokusombulula izisombululo, yaqhubela phambili phambili kwezobuchwephesha, kwaye yasungula izisombululo ezine zokutshaja ngokupheleleyo , kunye ne-UBC 75010 ye-bid2ctional V2G yokutshaja inqwaba, enokuhlangabezana nemeko ebanzi yesicelo seV2G kwixa elizayo, ukuseta umtshiso wencopho.
Ngokutsho kwe-China ukutshaja inethiwekhi, i-UUGreenPower iye yaqhubeka isungula inani lemodyuli yemveliso yokutshaja kunye neqela layo elomeleleyo le-R & D kunye neminyaka yetekhnoloji yokuqokelelwa kwicandelo lokuguqulwa kwamandla, kwaye igcine indawo yayo ekhokelayo kubuchwephesha kolu shishino. ixesha elide. Kumboniso wokugqibela, imodyuli yokutshaja ephezulu ye-IP65, eyaqala ukwaziswa kushishino ngokwenziwa kwezinto ezintsha ezizimeleyo, ifake intsholongwane engalweni kwicala lophuhliso lokuthembeka okuphezulu kunye nokufumaneka okuphezulu kwishishini lokutshaja.
Kumboniso walo nyaka, iimveliso ezintsha ezahlukeneyo ezasungulwa ngu-UUGreenPower zatsala abantu abaninzi abasuka kolu shishino ukuba babukele nakwimithombo yeendaba ukuze bakhuphisane ngokubhengezwa. I-China ibiza inethiwekhi yemfumba iphinde yenze udliwanondlebe noBo Jianguo, umphathi jikelele we-UUGreenPower, owathi ngomonde wazisa iimveliso ezintsha kuthi.
Izisombululo ezine zokutshaja kakhulu
40kW isisombululo sokutshaja ngokukhawuleza kwamandla
NgokukaBai Jianguo, umphathi jikelele we-UUGreenPower, UUGreenPower iyaqhubeka kwindawo yayo ekhokelayo kwicandelo lobuchwephesha bokutshaja amandla. Ngetekhnoloji yamandla yamva nje kunye netekhnoloji yokuhambisa ubushushu, imodyuli yokutshaja yamandla angama-40kW igcina ubungakanani obufanayo kunye nomdibaniso kunye nemodyuli ye30kW Kuyilo lwenqwaba iphela, isithuba kunye neendleko zayo yonke imfumba ziyagcinwa. Ukuxinana kwamandla komfumba yonke inyuswe nge-30%, kwaye ixabiso leyunithi nge-watt nganye lehle nge-10%.
Umboneleli wokuqala kwishishini ukukhuthaza ubungakanani obufanayo, amandla aphezulu emodyuli yokutshaja engama-40kW, ukuxinana kwamandla ukuya kuthi ga kwi-60W / ngaphakathi3, ekhokelela kumgangatho wokubekwa komzi mveliso.
Amanqanaba amathathu e-Vienna PFC topology, ezine ze-LLC ezinxibelelanisiweyo zeteknoloji, ubuchwephesha obuhlangeneyo bokuhlanganisa iteknoloji, i-algorithm echanekileyo yolawulo lwedijithali, uyilo olusebenzayo loyilo
Lungisa kwindlela yophuhliso yamandla aphezulu kunye nokutshaja ngokukhawuleza kolu shishino
Ukuxinana kwamandla kuyo yonke le mfumba kunyuswe nge-30%, kwaye ixabiso leyunithi ngexabiso le-watt nganye lincitshisiwe nge-10%
Isisombululo sokukhusela ngokukhawuleza se-IP65
Icandelo eliphambili lemfumba yokutshaja yimodyuli yokutshaja. Ukunyaniseka kunye nozinzo lwentsebenzo yayo sisitshixo ekuthembekeni kwenkqubo yokutshaja. Ngokunyuka ngokukhawuleza kwenani leemfumba zokutshaja ezifakwe e-China, umahluko wentsebenzo yokwenyani yokusebenza kweemodyuli zokutshaja kubonakala kancinci. Kwiminyaka yakutshanje, inqanaba lokungaphumeleli kwemodyuli yokutshaja ibe yeyona ngxaki iphambili echaphazela ukufumaneka kwenkqubo yenqaku lokutshaja.
Ngokutsho kohlalutyo lweengcali zeshishini, ukutshaja iimfumba kufakwe ngokubanzi kufakwe ngaphandle kuthuli, kubushushu obuphezulu kunye nemvula ebonakalayo kwindawo. Nangona inqanaba lokukhusela iimfumba zokutshaja ngokubanzi li-IP54, uyilo lwemodyuli yokutshaja ngokubanzi yi-IP20 ngoyilo lomoya. Uthuli, inkungu yetyuwa, ukufuma kwamanzi emvula kwindalo esingqongileyo kuya kuthi ngokuqinisekileyo kungene kwimodyuli, emva koko kuchaphazele ubomi benkonzo. Ke ngoko, ukusombulula le ngxaki ngokusisiseko, ukuphucula ukhuselo lokusingqongileyo kwemodyuli yokutshaja kuya kuba sisitshixo.
Kulo mboniso, i-UUGreenPower ibonise inguqulelo ephuculweyo ye-2.0 yemodyuli yokhuseleko lwe-IP65. Emva kwesiqinisekiso esingqongileyo esingaphezulu konyaka omnye, inguqulelo entsha yemodyuli inokufakwa kwimarike ngomkhamo omkhulu kungekudala. Imodyuli yokhuseleko oluphezulu lwe-IP65 yamkela itekhnoloji yokuhambisa ubushushu yokuhambisa ubushushu, kwaye inkqubo inokuthenjwa iphuculwe kakhulu. Umjikelo wobomi jikelele we-TCO yenkqubo yokutshaja inokusindiswa malunga ne-40000 RMB ngokuthelekiswa nemodyuli ye-IP20 kwiminyaka eli-10.
Ilungele imeko yesicelo esibi njengothuli lwesanti, inkungu yetyuwa kunye nokuxinana
Ukunyaniseka kwemodyuli kuyaphuculwa, ukugcinwa simahla kangangeminyaka emi-5, kwaye iindleko zokugcina zonyaka zigcinwa malunga ne-3000 RMB / ngonyaka
Imfumba yonke yokutshaja iphuculwa yaya kwi-IP65 ngaphandle kokuyilwa okungangenisi manzi kwemodyuli yokutshaja, egcina iindleko
Imfumba yokutshaja ayifuni kunxibelelana ne-AC, umqhaphu wokuqinisekisa uthuli, ifeni yokukhupha, ukugcina malunga ne-3000 RMB / ikhabhinethi
Ukuthatha i-120kw inqwaba enye njengomzekelo, ulondolozo lwe-TCO lweminyaka emi-5 kunye neminyaka eli-10 lumalunga ne-10000 RMB kunye ne-40000 RMB ngokwahlukeneyo
30kW bhetyebhetye eliphezulu isisombululo sokutshaja ngokukhawuleza
U-Bo Jianguo, umphathi jikelele we-UUGreenPower, ukwazise enye imveliso yeenkwenkwezi, uthotho lwe-30kW yemodyuli yokutshaja eneenkcukacha ezininzi zeemeko ezahlukeneyo. Ngokuka Mnu. Bai, le modyuli inokuhlangabezana neemfuno zokutshaja ngokukhawuleza kwezikhululo zokutshaja kwiimeko ezahlukeneyo kwaye uncede abathengi baqonde esona sikimu sokufumana iindleko. Umzekelo, i-750V / 40A yesikhululo sokutshaja ibhasi, i-1000V / 30A yesikhululo sokutshaja imoto kunye ne-500V / 60A yesikhululo sokutshintshiselana ngombane. Ukongeza, imeko yokunyibilikisa ityuwa yokutshiza, kukho iglu yokugcwalisa imigaqo (f) imodyuli kunye neenkcukacha zaseYurophu (b) kwimodyuli yaseYurophu.
Isabelo sentengiso esikhokelayo se-30kW yemodyuli yokutshaja amandla
Iinkcukacha ezahlukeneyo ziyafumaneka. I-750V / 40a, 1000V / 30A kunye ne-500V / 60A zilungele iimeko ezahlukeneyo zokutshaja, ezinje ngesikhululo sokutshaja ibhasi, isikhululo sokutshaja kwezithuthi zentlalo kunye nesikhululo sokutshintshiselana ngombane
Ukugcwaliswa ngokupheleleyo kwemigaqo (f) kukhetho, kulungele usetyenziso olungqongqo lokusingqongileyo
Ukucaciswa kweMigangatho yaseYurophu (b) ngokuzithandela, kufanelekile kwisikhululo sokutshaja esiseYurophu
Ngokweziganeko ezahlukeneyo, khetha imigaqo efanelekileyo yokufezekisa ezona nkqubo zesicelo seendleko
Mnaukubeka iliso ngobukrelekrele ye Ukutshaja i-EV isisombululo
Kwangelo xesha, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezifanelekileyo zokufikelela kumatshini omnye ophethe imipu emithathu efunwa yimfumba yokutshaja esemgangathweni phesheya kweYurophu, iUUGreenPower ikwasungule ngokukodwa imodyuli yokujonga imfumba yokubeka imfumba kulo mboniso. Icandelo elinye lokubeka iliso linokuhambelana nomgangatho waseYurophu, umgangatho waseJapan kunye nemigaqo yokujonga esweni esemgangathweni. Xa kuthelekiswa nesikimu sebhodi yeadaptha eqhelekileyo kwintengiso, iindleko zokubeka iliso zingagcinwa malunga ne-50%.
Eyenzelwe ngokukodwa amandla amatsha okutshaja amandla, anoxanduva lokunxibelelana nebhetri yamandla esithuthi sombane ukufezekisa inkqubo yokutshaja
Inkxaso emanyeneyo yomgangatho kazwelonke, umgangatho waseYurophu nomgangatho waseJapan
Xhasa umpu omtsha wesizwe oqhelekileyo, umpu oqhelekileyo wase-Yuropu, umpu oqhelekileyo waseJapan, umpu otshintshanayo
Xhasa umatshini omnye ngemipu emithathu (CCS + chademo + AC)
Xhasa umatshini omnye ngemipu emithathu (CCS + CCs + GB / T)
Xhasa umatshini omnye ngemipu emithathu (CCS + chademo + GB / T)
Xa kuthelekiswa nebhodi yeadaptha ngokubanzi kwimarike, iindleko zokubeka iliso zingagcinwa malunga ne-50%
Uchungechunge lwe-UBC ye-V2G yokutshaja imfumba
Kudliwanondlebe, uMnu Bai wakhankanya ukuba ukonyuka okukhawulezayo kwenani leemfumba zokutshaja kuzise nenye ingxaki engenakuhoywa. Ngo-2030, inani lezithuthi ezitsha zamandla eTshayina liya kufikelela kwizigidi ezingama-80. Ngelo xesha, ukufikelela ngokungalunganga kwenani elikhulu leemfumba zokutshaja kuya kukhokelela kutshintsho olukhulu lomthwalo, oluya kubangela ifuthe elikhulu kwigridi yamandla. Ukuba akukho manyathelo athathwayo, iingxaki ezinzulu njengokugcwala kwegridi yamandla kwaye kungabikho mbane unokwenzeka ngo-2020.
Ukutshaja ngokulandelelana kuye kwaba yindlela ebalulekileyo yokunciphisa okanye yokuphelisa oku. Inokukhokela kwaye iququzelele isimilo sokutshaja, incede igridi yamandla ukusika umthwalo kunye nokugcwalisa intlambo, ukuphucula ukusebenza ngokusebenzayo kothungelwano lokuhambisa kunye nokukwazi ukusebenza kwigridi yamandla, kunye nokufezekisa imeko yokuphumelela phakathi kwabasebenzisi kunye negridi. Imfumba yokutshaja nomsebenzi we-V2G iya kuba sisixhobo esibukhali ukuqonda ukutshaja ngocwangco kunye nokukhupha iigridi zamandla.
I-V2G ye-bidirectional yokutshaja imfumba ye-UBC 75010 enomoya omhlophe iqokobhe eliqaqambileyo kunye noyilo lokubona ihashe kwafunyanwa kwindlwana yeUUGreenPower. Imveliso yamkela uyilo olukhuselweyo oluphezulu lwe-IP65 kunye nokuzahlula rhoqo, kunye nobubanzi bevolthi yamandla rhoqo kunye noyilo lwengxolo ephantsi. Umbane wegridi oxhunyiwe unokuziqhelanisa nomgangatho kazwelonke, umgangatho waseYurophu kunye neMigangatho yaseMelika. Amandla alinganisiweyo yi-7KW, enokuziqhelanisa nendawo yokufaka i-7KW AC yokutshaja imfumba. Inokutshintsha endaweni ethe ngqo kwaye ibe nolungelelwaniso olugqwesileyo lobunjineli.
"Cinga ngalo mfanekiso. Xa upaka isithuthi sakho sombane kwindawo yokupaka kunye ne-UBC efaka imfumba kwimida ebekiweyo ngexesha lasemini, kwaye uthathe imoto emva komsebenzi ebusuku, ngokungazi uya kuhlawulisa inqwaba ye-yuan kwiakhawunti yakho. Ngaba uziva ukhululekile? " Mnu Bai uthe